Umqaphi wase-DRC ubulawe ngabazingeli abangekho emthethweni | Scrolla Izindaba
Umqaphi wase-DRC ubulawe ngabazingeli abangekho emthethweni
Abaqaphi babulawa ngabazingeli abazingela ngokungemthetho e-Virunga National Park ngenkathi besemsebenzini bevikela ama-gorilla.
Omunye umqaphi oneminyaka engama-47 ubudala, uBagurubumwe Deogene, kubikwa ukuthi udutshulwe wabulawa ngabazingeli abangekho emthethweni ngoMgqibelo ngesikhathi besebenza epaki likazwelonke lase-Democratic Republic of Congo – eduze nesigodi i-Sarambwe.
UDeogene kuthiwa ungumqaphi we-14 owabulawa ngabazingeli abazingela ngokungemthetho kulo nyaka kuphela, kanti bayi-170 abaqaphi base-Virunga asebebulewe besemsebenzini eminyakeni edlule.
Iqembu elihlomile i-FDLR-RUD kuthiwa yilo eliholele ekuhlaselweni kwabaqaphi.
Abaqaphi kuthiwa bebelokhu bewavikela ama-gorilla ngisho nangesikhathi sobhubhane lwe-coronavirus.